Onyonyo izizi nke OnePlus 5T gosipụtara OnePlus | Gam akporosis
Izu abụọ gara aga ka anyị nụgoro asịrị banyere ama ọhụrụ OnePlus. Dị ka ị maara, ika ga ẹkedori OnePlus 5T. Versiondị ọhụụ dị elu nke ha bido na June nke afọ a. Obere obere nkọwa banyere ngwaọrụ a ka amatara. N'ezie, ụbọchị ole na ole gara aga E gosipụtara atụmatụ nke otu ihe ahụ.
Na ngwụcha ọnwa a, anyị ga-amata ekwentị a. Na Ngosipụta ngosipụta nke OnePlus 5T ga-eme na November 20. Yabụ n'ime nanị ihe karịrị izu abụọ anyị ga-amata ekwentị ọhụrụ a dị elu site na akara ndị China. Ruo oge ahụ, a ka nwere ọtụtụ akụkụ nke a ga-ekpughe. Mana OnePlus ekpugherela ihe anyị na-eche. Anyị amaworị oyiyi izizi mbụ nke OnePlus 5T.
La Akara ndị China na-akọrọ na netwọkụ mmekọrịta ihe osise izizi nke ekwentị ọhụrụ ya. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmaraworị atụmatụ nke ngwaọrụ ahụ. E wezụga inwe ike ịchọpụta ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu maka ihe osise izizi mbụ a. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị a?
Otu n'ime ole na ole na isi mgbanwe nke OnePlus 5T jiri ya tụnyere mbipute ya gara aga bụ akụkụ anụ ahụ. Abọchị ole na ole anyị maara na OnePlus ga-esonye ejiji nke enyo na-enweghị okpokolo agba. Ya mere, ekwentị ga-enwe a ihuenyo na 18: 9 ruru (Dị ka nke dị na Galaxy S8). Nke a rụpụtara na ekwentị nwere nnukwu ihuenyo.
La ihuenyo ọhụrụ bụ sentimita isii, ọ bụ ezie na ọ na-eme ya na otu aru ekwenti 5,5. Ya mere mmụba nke nha ihu igwe emebeghị ka ekwentị buru ibu. Ọrụ dị mkpa na ụdị nke ika ahụ, mana nke ndị na-azụ ahịa ga-eji akpọrọ ihe.
OnePlus na-ekepụta ezigbo ọ ofụ maka mwepụta nke OnePlus 5T. Firmlọ ọrụ ahụ chọrọ ka ihe niile na-aga nke ọma ma nweta ezigbo ahịa ọdịda a na ekwentị ọhụrụ a. N'ime izu ndị a niile, anyị ga-amụta nkọwa niile banyere ekwentị a. Kedu ihe ị chere gbasara ekwentị OnePlus ọhụrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » OnePlus na-ebipụta foto izizi nke OnePlus 5T
Ihe mkpisiaka ihe mmetụta adịghị n'azụ?
OPPO R11S na R11S Plus: Abụọ ọhụrụ flagship smartphones si OPPO